Namoonni talaallii vaayiresii koronaa guutummaan fudhatan haguuggii afaanii fi funyaanii kaayyachuu dhiisuu danda’u, wal irraa hiiqiinsa hawaasummaas dhaabuu danda’u jechuun angawoonni eegumsa fayyaa Yunaayitid Isteetis beeksisaniiru.
Haa ta’u malee geejjiba uummataa isa kamiinuu, hospitaalota, manneen hidhaa fi qubsuma namoonni mana jireenyaan ala keessa jiraatan keessatti maaskii kaayyachuutu barbaachisa. Yeroo itti haala idileetti deebinu akkasii martinuun keenya hawwaan eegaa turre jechuu dhaan daayirikterri waaltaalee to’annoo dhukkubootaa Dr. Rochelle Walensky beeksisaniiru.
Jaappaan keessaa olompikiin Tookiyoo akka hafu gaafachuf namoonni 350,000 mallattoo walitti qabanii jiru. Kunis jimaata har’aa hoogganaa koree Olompikii akkasumas bulchaa Tookiyoo Yurkiikoo Kooyiikeef ergameera.
Olompikiin Jaappaan Adoolessa 23 jalqabamuuf kan ture yoo ta’u, Tookiyoo dabalatee Jaappaan keessatti vaayiresiin koronaa hammaatee jira.
Waaltaan qorannaa vaairesii koronaa Joons Hopkins akka beeksisetti namoonni miliyoonni 24 Hindii keessaa vayirsihaan yoo qabaman, Yunaayitid Isteetis keessaa miliyoona 32.9 fi Brazil keessaa immoo miliyoonni 15.4 qabamuu beeksisee jira.